Madaxweynaha Soomaaliya oo xalay khudbad ka jeediyey munaasabad lagu xusay 15 May – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud caawa Khudbadda ka jeediyey Munaasabadda 15-ka Maajo Maalinta Dhallinyada Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha waxa uu khudbaddiisu ku bilaabay.“Sharaf weyn bey ii tahay in aan caawa idin kala qeyb-galo xuska iyo damaashaadka munaasabaddan weyn ee Maalinta Dhallinyarada Soomaaliyeed. Maalintan waxaa ay goob gaar ah ku leedahay xasuusteenna qarannimo. Waa maalin nagu dhaqaajineysa ka fikirta mustaqbalka dhallinyarada Soomaaliyeed”.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa yiri.” Sida aad wada ogtihiin, halgankii loo soo galay gobannimada iyo xorriyadda Soomaaliyeed ee looga xureynayey xukunkii gumeysiga waxa uu ahaa mid adag oo dheer. Ururkii Dhallinyarada Soomaaliyeed oo SYL loo yaqaano waxa uu ka koobnaa gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed oo go’aan ku gaaray inay hoggaamiyaan halgankaas. Halgankaas dheeraa waxaa loo huray oo lagu waayay naf, hanti iyo maal si ay Soomaaliya u xurowdo. Taas oo keentay in Soomaaliya dhalato sanadkii 1960kii sida waddamo kale oo Afrikaan ah.”.
“Maanta waa wax wanaagsan in aan qirno taariikhdaas gabdhahaas iyo wiilashaas oo iyaga oo da’ yar, khibrad badanna lahayn, ay isticmaaleen geesinnimadooda iyo dhaaqadooda si loo dhiso Qaranka aan maanta heysanno”.
“Waan ku faaneynaa Soomaalida ay dhiseen. Aniga maanta idin horjoogo waxa aan ahay Madaxweyne la doortay taas oo aan ku gaaray si dimuqraadi ah. Waan karnaa in aan hagaajinno dalkeenna iyo mustaqbalkiisa” Ayuu yiri Madaxweynaha jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha ayaa sheegay in mustaqbalka dalka uu ku jiro gacmaha dhallinyarada Soomaaliyeed. “Soomaaliya dhibaatooyin badan bey soo martay sanadihii la soo dhaafay, waxaana rumeysanahay mustaqbalka dalkan iyo dadkiisa waxa uu kujiraa gacmaha gabdhaheenna iyo wiilasheenna”.
Madaxweynaha ayaa ammaanay u jeediyey dhallinyarada Soomaaliyeed dalka wax ku baratay iyo kuwa dibadaha ka soo laabtay isla-markaana ka qeyb qaadanaya horumarka dalka. “Waa wax lagu farxo in aan aragno dhallinyaradeennii oo ka badbaaday burburkii oo maantana aadaya jaamacadaha dalkeenna, dhallinyaradii oo shaqeyneysa oo noloshooda dhisaaya iyada oo weli dhibkii socda. Sidoo kale, dhallinyarada Soomaaliyeed ee dibadda ka soo laabatay waxa ay ka qeyb qaadanayaan dib-u-dhiska dalkooda. Waxa iskuxiraya waa aaminaadda ay dalkooda aaminsan yihiin iyaga oo yididiilo fiican u qabo dalkooda.
Madaxweynaha ayaa yiri “Dowladdu waxa ay aqoonsan tahay dhallinyaradu in ay tahay hantida ugu muhiimsan ee ee qarankan. Maanta 70% tirada dadkeenna waa dhallinyaro kayar 30 sano. Taas oo nasiineysa quwaddii aan ku dhisi laheyn dalkeenna oo nabdoon oo mustaqbal leh”.
Madaxweynaha ayaa xafaladda ka sheegay in Dowlada ay wado qorshayaal lagu horumarnaya dhallinyarada. “Todobaadkii la soo dhaafay, Wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxa ay qaban-qaabisay tababar loo sameynayo maamullada KMG ah iyada oo lagu tababarayo aqoonta la xiriirta Dowladda hoose, Booliska, Sir-doonka, iyo Garsoorka si loogu meeleeyo goballada kala duwan islamarkaana u fududaato isku-xirnaanta iyo xiriirka Dowladda Dhexe iyo goballada. Saraakiishaas tababarkaas ka qeyb-galay waxa ay qaateen duruus ku saabsan dib-u-aas-aasidda xiriirka Dowladda iyo dadweynaha iyo sidii loo wanaajin lahaa gaarsiinta adeegga iyo kala dambeynta sharciga. Iyada oo qorshayaasheennii ay isubeddelayaan barnaamijo la taaban karo maalinba maalinta ka dambeysa, sida aad indhihiinna ku aragtaan, waxa aan dhallinyarada ku dhiirrigalinayaa in ay ka faa’ideystaan howlaha dowlad-dhisidda iyaga oo ka qey-qaadanaya dhisidda qarankooda. Iyada oo ay waxaas oo horumar ah jiro, haddana waan ogahay in ay mushkilaad badan na hor yaallaan. Adeegyadii bulshada ma dhameystirna sida waxbarashada iyo caafimaadka. Waan ogahay shaqo-la’aanta dhallinyadu in ay kor u dhaafsan tahay 50%. Caqabadaas iyo kuwa kaleba waxa ay ku hor-gudban yihiin dadaalkeenna dowlad-dhisidda
Madaxweynaha ayaa hadalkiisa sii raaciyey. ”Intaas waxaa dheer oo nasiib-darro ah in weli maanta ay jiraan dhallinyaro badan oo la marin-habaabiyey loona isticmaalayo sharta ay wadaan kuwo wata fikrado qaldan. Hadda waxaa la gaaray waqtigii ay dhallinyaradu maal-galin lahaayeen mustaqbalkooda. Dhallinyaradu iyaga ayaa hormuud u ah tijaabinta waxyaalaha cusub iyo dhalinta isbeddelka iyaga oo dadka kalena ugu yeeraya in ay soo raacaan. Idinka ayaa curin kara mustaqbal wanaagsan islamarkaana leh aqoontii bulsho iyo maskaxeed ee loo baahnaa in dalkaan lagu dhiso. Sidaa daraadeed, dhallinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxa aan ugu baaqayaa in ay qeyb ka noqdaan taariikhdan qormeysa. Soomaaliya isbeddel baa ku socda, dhallinyaradana waxaa laga rabaa in ay laf-dhabar u noqdaan marxalladdan taariikhiga ah. Fursaddan ka faa’ideysta oo noqdo kuwii ay bulshada qeybaheeda kale ku dayan lahaayeen.
“Waa inaad dadaalka sii laba-jibaartaan si ay fursaduhu idiin dhaafin. Idinka ayaa iska leh go’aanka jidka aad qaadeysaan iyo waliba waxa ay Soomaaliya ku dambeyn doonto sanadaha soo socda. Ayuu sidoo kale, Madaxweynuhu yiri.
Ugu dambeynti, Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ka hadlay baaqii qaar ka mid ah xildhibaandu soo saareen ee uga dalbadeen inuu is casilo, wuxuuna yiri “Waxa aan rabaa in aan fursaddan uga faa’ideysto in aan wax yar ka dhaho taladii ay soo jeediyeen dhawaan xubno ka mid ah Golaha Shacabka. Waan akhriyey dhammaan qodobada ay ku xuseen ra’yigooda. Waxa ayna qadobadu ahaayeen kuwa kusaabsan howlaha xukuumadda. Kuwaas oo wax-ka-qabashadooda horumar weyn laga sameeyey, qaarkalena weli lagu howl jiro. Waxaa lama huraan ah in hayadaha dowladda oo dhan ay iska kaashadaan horumarinta wadanka. Baarlamaankana muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay hor uu socodka wadanka, waxaanna kula dardaarmeynaa inuu dowr libaax ah ka qaato sidii dalka iyo umadda soomaaliyeed looga saari lahaa marxaldan adag ee ay ku sugan yihiin”.
Xukuumadda Soomaaliya oo meelmarisay sharciga Isgaarsiinta